आईपिएलमा बेञ्जमै धेरै समय बिताउन सक्ने दिल्लीका खेलाडीहरु – Talking Sports
कागजमा हेर्ने हो भने दिल्ली क्यापिटल्स निकै बलियो टोली देखिन्छ । गत सिजन तेश्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको दिल्लीमा युवा र अनुभबी खेलाडीको मिश्रण छ र युवा कप्तान श्रेयस ऐयरले टोलीको नेतृत्व गर्ने छन् ।
दिल्लीले यस सिजन अस्ट्रेलियाका अलराउण्डर मार्कस स्टोइनिस, वेस्ट इन्डिजका ब्याट्सम्यान सिम्रोन हेटमायर र इङ्गल्याण्डका आक्रमक ओपनर जेसन रोयलाई भित्र््याएको छ भने तिब्र गतिका बलरको रुपमा दक्षिण अफ्रिकाका एनरिच नोर्टजेलाई समावेश गरेको छ ।
त्यस्तै यस सिजन दिल्लीले राजस्थान रोयल्सका पुर्व कप्तान तथा ब्याट्सम्यान अजिंक्या रहाने र किंग्स ११ पन्जाबका कप्तान तथा अफ स्पिनर रविचन्द्रन अश्विनलाई पनि ल्याएको छ । यस सिजन उपाधि चुम्ने लक्ष्यमा रहेको दिल्लीका प्रशिक्षक हुन् अस्ट्रेलियन पुर्व कप्तान रिकी पोन्टिंङ ।
दिल्लीले एक पछि अर्को खेलाडीलाई आफ्नो टोलीमा भित्र्याएका कारण सुरुवाती ११ छान्न त्यती सहज देखिदैन । राम्रा खेलाडीले पनि बेञ्चमा नै बस्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ । आज हामी तीन खेलाडीको चर्चा गर्दैछौं जसले यस सिजनको आईपीएलमा धेरै समय बेञ्चमा नै बिताउनु पर्ने हुन सक्छ ।
१. एलेक्स केरी
अस्ट्रेलियाका विकेट किपर ब्याट्सम्यान एलेक्स केरी अस्ट्रेलियाको लागि एकदिवसीय र ट्वान्टी ट्वान्टीमा फिनिसरका रुपमा खेल्ने गर्दछन् । टप अर्डर र मध्यक्रममा दिल्लीसँग खेलाडीहरु प्रशस्त रहेका छन् ।
त्यसमाथि चार जना बिदेशी खेलाडीहरु भित्र पर्नका लागि उनले रोय र हेटमायर जस्ता ब्याट्सम्यानहरुसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ । विकेट किपरका रुपमा नै हेर्ने हो भने पनि रिषभ पन्तको आईपीएलको किर्तिमान हेर्दा उनले विकेट किपरका रुपमा पनि टोलीमा स्थान बनाउन मुस्किल पर्दछ ।
केरीले यस सिजन सुरुवाती ११ मा स्थान बनाउने सम्भावना निकै कम रहेको छ भने उनले धेरै समय बेञ्चमा बिताउन पर्ने देखिन्छ ।
नेपाली क्रिकेट टोलीका युवा लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेले जारी क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा जुन प्रकारको प्रदर्शन गर्दैछन् त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने उनी सुरुवाती ११ का लागि प्रवल दावेदार हुन् । झन् त्यस माथि यस पटकको आईपीएल युएईमा हुँदैछ जहाँको पिच स्पिनरलाई मद्दत गर्ने खालको हुन्छ ।
तर पनि यस सिजनमा सन्दिपले अघिल्लो सिजनहरुमा जस्तै धेरै समय बेञ्चमा नै बिताउन पर्ने हुनसक्छ ।
दिल्लीमा पहिले नै लेग स्पिनरका रुपमा अमित मिश्रा रहेका छन् भने यस सिजन अश्विनलाई अफ स्पिनरको रुपमा ल्याएको छ भने पोन्टिङ्गको नजरमा स्पिन अलराउण्डर अक्षर पटेल रहनेछन् । तीन स्पिनर नै राखेको खण्डमा पनि दिल्लीले अर्को स्पिनर खेलाउने रिस्क लिन चाहदैन । सन्दिपको प्रतिस्पर्धा मिश्रासँगै, अश्विन र अक्षरसँग त हुनेछ नै सँगै चार बिदेशी खेलाडीको कोटामा पनि अर्को प्रतिस्पर्धा रहनेछ ।
सन्दिपले दुई सिजनमा गरेर दिल्लीबाट मात्र नौं खेल खेल्ने मौका पाएका थिए भने तेश्रो सिजनमा पनि उनले धेरै समय बेञ्चमा नै बिताउन पर्ने देखिन्छ ।
१. अजिंक्या राहाने
राहानेलाई दिल्लीले यसै सिजन आफ्नो टोलीमा समावेश गरेको हो । तर दिल्ली टोलीमा शिखर धवन र पृथ्वी स जस्ता ओपनर भएका कारण उनले ओपनिङमा स्थान पाउने सम्भावना निकै कम रहेको छ । केहि समय अघि राहानेले आफु ओपनिङ गर्ने गरेको भए पनि टोलीलाई आवश्यक परेको खण्डमा मध्यक्रममा फिनिसरका रुपमा खेल्नका लागि पनि तयार रहेको धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
तर दिल्लीमा बिदेशी खेलाडीहरुको संख्या धेरै रहेकोले उनलाई मध्यक्रममा खेल्दै भए पनि टोलीमा स्थान बनाउनका लागि पनि सहज हुने छैन । त्यसैले गर्दा उनले पनि धेरै समय बेञ्चमा नै बिताउन पर्ने देखिन्छ ।